OPPO R15: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र प्रक्षेपण पुष्टि गरियो Androidsis
ओप्पो एक ब्रान्ड हो जुन आधिकारिक रूपमा यस बर्ष यूरोपमा अवतरण गर्ने योजना बनाएको छ। चिनियाँ ब्रान्ड यस वसन्तमा स्पेन र अन्य बजारहरूमा आइपुग्नेछ। तसर्थ, तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरूलाई नयाँ मोडेलको साथ आउनु पर्छ। हस्ताक्षर अब आफ्नो नयाँ प्रमुख विपक्ष १ 15 प्रस्तुत गर्दछ। एक फोन जुन सपना मिरर पनि भनिन्छ।
फोन सफल हुन चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ आशा बन्छ। यस OPPO R15 का पूर्ण विशिष्टताहरू र यसको विशेष ड्रीम मिरर संस्करण पहिले नै प्रकट भइसकेको छ। यसैले उपकरणले अब कुनै गोप्यता राख्दैन। हामी के आशा गर्न सक्छौं?
हामीले उपकरणलाई हेरेको बेला हाम्रो ध्यान खिच्ने पहिलो चीज भनेको चीनियाँ फर्मले त्यस क्षणको फेसनमध्ये एउटाको मृत्यु भयो। तपाईं देख्न सक्षम हुनुभएको छ कि फोन मा लोकप्रिय खाच हुनेछ। पक्कै पनि धेरैले मन नपराउने कुरा। तर हामी आउने महिनाहरु मा बजार मा धेरै पाउन जाँदैछन्। हामीले तपाईंलाई भनेको छै, हामी पहिले नै यस OPPO R15 का विवरणहरू जान्दछौं.
1 निर्दिष्टीकरण OPPO R15 र OPPO R15 ड्रीम मिरर
1.1 विशिष्टता ओप्पो आर ११
2 निर्दिष्टीकरण OPPO R15 सपना मिरर
निर्दिष्टीकरण OPPO R15 र OPPO R15 ड्रीम मिरर
चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उपकरणको दुई संस्करण बीच भिन्नता धेरै छैन। तर यो अवस्थित दुई संस्करणहरू प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि अस्तित्वमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं दुबै मोडेलको विवरण। पहिले फोनको सामान्य संस्करण र त्यसपछि यसको ड्रीम मिरर संस्करणको।
विशिष्टता ओप्पो आर ११
अपरेटिङ सिस्टम: Android .8.1.० Oreo
निजीकरण तह: र OS्ग ओएस .5.0.०
स्क्रिन: पूर्ण एचडी + रिजोलुसन र १:: ratio अनुपातको साथ .6,28.२19 इन्च
प्रोसेसर: MediaTek हेलियो P60
आन्तरिक भण्डारण: 128 जीबी
फ्रन्ट क्यामेरा: अपर्चरf/ 20 संग १ 2.0 MP
रियर क्यामेरा: १MP एमपी + MP एमपी डुअल क्यामेरा अपर्चरहरूf/ १.16 +f/ २.२, EIS
ब्याट्री: द्रुत चार्जको साथ 3.450,२२० एमएएच
अरूलाई: फिंगरप्रिन्ट रिडर, USB प्रकार सी, ब्लुटुथ 4.2.२, अनुहार पहिचान, IA चिप
आयामहरू: १155,1. x x .75,2२..7,4 x .XNUMX..XNUMX मिमी
निर्दिष्टीकरण OPPO R15 सपना मिरर
ब्याट्री: द्रुत चार्जको साथ 3.400,२२० एमएएच
आयामहरू: १155,3. x x .75,0१..7,5 x XNUMX..XNUMX मिमी
चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फ्ल्यागशिपको दुई संस्करण बीच भिन्नता कम छ। मुख्य परिवर्तन प्रोसेसरलाई जनाउँछ। जस्तो संस्करणमा तिनीहरू हेलियो P60 मा शर्त लगाउँछन्, MediaTek बाट नवीनतम प्रोसेसर र अन्यमा उनीहरूले स्न्यापड्रैगन 660० प्रयोग गर्दछ। तिनीहरू दुई बराबर प्रोसेसर हुन्, त्यसैले सिद्धान्तमा अपरेशनको सर्तमा धेरै परिवर्तनहरू हुनुहुन्न।
साथै, ब्याट्रीमा परिवर्तन आएको छ, किनकि ड्रीम मिरर संस्करणको अलि कम क्षमता छ। फोनको आयाममा पनि दुई संस्करणहरू बीच परिवर्तन अवलोकन हुन्छ। यद्यपि यो यति सामान्य परिवर्तन हो कि हामी हेर्छौं कि स्क्रिनको आकार परिवर्तन हुँदैन। तर दुई संस्करण बीच यो आकार भिन्नता को मूल अज्ञात छ। उच्च-अन्त।
यो आशा गरिएको छ कि फोन हाम्रो देशमा ब्रान्ड लैन्ड हुँदा पनि स्पेनमा आउँछ अर्को केही महिनामा यसैले यो राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशका लागि फर्मको प्रमुख बन्ने वाचा गर्दछ। यस उपकरणलाई तीन बिभिन्न रंगमा सुरूवात भइरहेको छ। हामी सक्छौं यो OPPO R15 सेतो, रातो र फिक्कामा किन्नुहोस्.
चीनमा यसको प्रक्षेपणमा यसको मूल्य २,2999 XNUMX yuan युआन छ। मूल्य छ कि परिवर्तन गरिएको छ 385 यूरो। यो ज्ञात छैन कि यो युरोपमा मूल्य हुनेछ वा तिनीहरूले पुरानो महादेशमा पुगे पछि उनीहरूले मूल्य बढाउनमा शर्त लगाउँदछन्।
अर्कोतर्फ हामीसँग छ OPPO R15 सपना मिरर। फोनको यस संस्करणमा एउटा हुनेछ 3299२425 of युआनको मूल्य, जुन विनिमय दरमा XNUMX२XNUMX यूरो हो। थप रूपमा, त्यहाँ एक सिरेमिक बडीको साथ संस्करण हुनेछ, जसको यसको मूल्य 3499। युआन हुनेछ २450० यूरो बदल्नका लागि.
फोनको दुई संस्करणहरु अप्रिल १ देखि चीन मा उपलब्ध हुनेछ। स्पेनमा तपाईंको आगमनको लागि तपाईंले केही महिना थप पर्खनु पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » विपक्ष R15: ब्रान्डको नयाँ प्रमुख